Kuhlangane imihlathi eyazanayo - Ilanga News
Home Izindaba Kuhlangane imihlathi eyazanayo
Kwethulwa incwadi yomsakazi woKhozi
KUNGESIKHATHI kwembulwa umfanekiso wekhava yencwadi ekhuluma ngo-Dudu “Lady D” Khoza ebhalwe nguSolwazi Velaphi “VVO” Mkhize. Kwabange-muva nguSolwazi Mkhize, kwesokunxele, noMnu Bongani Khoza kanti abapha-mbili nguNkk Zamo Mkhize (inkosikazi kaSolwazi Mkhize) noLady D. ISITHOMBE NGU: SABELO MASUKU
KUHLANGANE izizukulwane ezahlukene zoKhozi FM izolo ngeSonto esigodlweni sikaSolwazi Velaphi “VVO” Mkhize, eMlambomunye, eMgungundlovu, ngesikhathi kwethulwa incwadi elotshwe nguVVO ngomsakazi walo msakazo omkhulukazi e-Afrika, uDudu “Lady D” Khoza.
USolwazi Mkhize, owake waba ngumsakazi kuwona lo msakazo, uthi akubanga lula ukubhala incwadi ngoLady D oshayela uhlelo uJabul’ Ujule, olungena ngo-09h00-12h00 oKhozini kwazise ubesechithe abantu abaningi abebefisa ukubhala ngempilo yakhe.
Yize seziningi izincwadi ezibhalwe ngosaziwayo abehlukene base-Ningizimu Afrika – ikakhulukazi KwaZulu-Natal kodwa le ekhuluma ngoLady D, ngeyokuqala ukushicilelwa ngesiZulu.
ILANGA likhuluma noSolwazi Mkhize ngemuva kokwethulwa kwencwadi, uveze ukuthi ufikelwe wumcabango wokubhala ngoLady D ngemuva kokumqonda ukuthi ungumuntu onjani.
“Nakhona ngesikhathi ngiyomcela ukuthi ngicabanga ukubhala incwadi ngomlando wakhe, akuzange kube lula, kuze kwadingeka ukuba ngikhulume nomyeni wakhe, uMnu Bongani Khoza. Ngibhale le ncwadi ngoba ngifisa abantu bamqonde kahle uLady D ukuthi ungubani.
“Ngiyazi baningi abebehlala bezibuza ukuthi kungaba ukwenza kanjani ukuthi abe ngusaziwayo aphinde abe ngumama ekhaya, futhi abe ngumakoti kwaKhoza. Le kube ngenye yezincwadi engikujabulele kakhulu ukuzibhala ngoba uDudu akuhlukile nokuthi ngumama wesizwe sonke,” kusho yena.
Ezibongela uLady D ngencwadi yakhe, uthe uqale wafikelwa wumbuzo wokuthi kungani kumele avume kubhalwe ngempilo yakhe ngoba sekubhalwe kakhulu ngabanye osaziwayo.
Uthe baningi abebehlale beya kuyena beyocela ukubhala incwadi ngempilo yakhe kodwa abachithe.
“Kulokhu ngifikelwe wukuthi kubhalwe ngempilo yami ngenxa yokubona isidingo sokuqopha imilando yethu ukuze sigqugquzele abantu bakithi ekutheni babekezele, bafukamele amaphupho okwesikhukhukazi sifukamele amatshwele aso.
“Uma sizimisele, silalela abazali nabadala uma besiyala, siba sethubeni elingcono kakhulu lokufeza amaphupho ethu. Kukho konke esinakho empilweni yethu ngamunye ngamunye, ngiphakamisa kakhulu igama likaJehova,” kusho uLady D
Ukhuthaze ukuthi umuntu makaqale ngokubheka ikhono adalwe nalo kumbe alizuze ekukhuleni kwakhe.
“Kumele siphinde sihambisane nezinselelo zesikhathi esiphila kuzona. Ikhono ozalwe nalo kumele ulicwebezelise ukuze noma ufunde wagogoda, ukwazi ukwakha amathuba emisebenzi, kusizakale nabanye,” kusho uLady D.
Lo mcimbi ubuhanjelwe ngosaziwayo, abasakazi boKhozi nalabo abake bayibamba kulo msakazo kusukela usabizwa ngeRadio Zulu.
Uhlelo beluphethwe yintatheli yakwaSABC esimnkantshubomvu, uMnu Bongani Mavuso.
Phakathi kosaziwayo abebekhona kubalwa uBaby Cele ongumlingisi woZalo, futhi oyithwasa lase-Mlambomunye, uVicky Masuku, uMnu Welcome “Bhodloza” Nzimande, ngumphathi wezinhlelo oKhozini, uZandile Tembe, nomndeni wonke wakwaKhoza okuhlanganisa nezingane zika-Lady D.
Previous articleUSEPHUMELE OBALA U-ENHLE NGOKUCHITHEKA KOMSHADO WAKHE NO-BLACK COFFEE
Next articleKusuke umsindo ngemoto kangqongqoshe